Iindaba - IINGCEBISO NGOKUTSHINTSHA ITHERMOPLASTICS
Umatshini Welding PPR
Isixhobo sePPR Socket Welding
Umatshini wokuwelda weDigtel PPR
Socket Manual Welding Machine
Umatshini wencam ye-Butt Fusion
Arched umphezulu mgawuli
Umatshini wokunyathela we-CNC ozenzekelayo
-Zenzekelayo oluzenzekelayo Welding Machine
Full-oluzenzekelayo Isali Fusion Machine
Ngesanti kubunzulu baphantsi Butt Fusion Machine
Umatshini wokusika wee-Angle ezininzi
IINGCEBISO NGOKUTSHINTSHA ITHERMOPLASTICS
I-Welding yinkqubo yokudibanisa imiphezulu ngokuthambisa ngobushushu. Xa i-welding thermoplastics, elinye lamacandelo aphambili zizinto ngokwazo. Okwangoku ukuba i-welding yeplastiki ibijikeleze abantu abaninzi abasaziqondi iziseko, nto leyo ibaluleke kakhulu kwi-weld efanelekileyo.
Umgaqo omnye wenombolo ye-thermoplastics ye-welding kufuneka udibanise i-plastiki njengeplastiki. Ukuze ufumane i-weld eqinile, ehambelanayo, kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba i-substrate yakho kunye nentonga yakho ye-welding iyafana; umzekelo, i-polypropylene ukuya kwi-polypropylene, i-polyurethane ukuya kwi-polyurethane, okanye i-polyethylene kwi-polyethylene.
Nazi ezinye iingcebiso malunga nokudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zeeplastikhi kunye namanyathelo okuqinisekisa iwelding efanelekileyo.
I-Polypropylene (PP) yenye ye-thermoplastics elula ukuyidibanisa kwaye isetyenziselwa izicelo ezahlukeneyo. I-PP inokumelana okuhle kweekhemikhali, ubunzima obuphantsi obuthile, amandla aphezulu aqine kwaye yeyona polyolefin izinzileyo. Izicelo ezingqiniweyo ezisebenzisa i-PP zizixhobo zokuxhoma, iitanki, i-ductwork, ii-etchers, ii-fume hoods, i-scrubbers kunye namathambo.
Ukuze i-weld PP, i-welder kufuneka isethwe malunga ne-572 ° F / 300 ° C; Ukugqiba ubushushu bakho kuya kuxhomekeka kuhlobo luni lwe-welder olithengayo kunye neengcebiso ezivela kumenzi. Xa usebenzisa i-thermoplastic welder ene-500 watt 120 volt element yokufudumeza, umlawuli womoya kufuneka abekwe malunga ne-5 psi kunye ne-rheostat ngo-5. Ngokwenza la manyathelo, kufanele ukuba ubekwe kufutshane ne-572 ° F / 300 ° C.
Enye into elula yokwenza i-thermoplastic kwi-weld yi-polyethylene (PE). I-Polyethylene yinkcaso yokuchasana, inokumelana ne-abrasion ekhethekileyo, amandla aphezulu aqine, iyakwazi ukuhanjiswa kwaye inokutsalwa kwamanzi okuphantsi. Izicelo eziqinisekisiweyo ze-PE yimigqomo kunye neelayers, iitanki, iinqanawa zaselebhu, iibhodi zokusika kunye nezilayidi.
Umgaqo obaluleke kakhulu malunga ne-polyethylene ye-welding kukuba unako ukutshintshela phantsi ukuya phezulu kodwa ungabi phezulu ukuya phezulu. Ngentsingiselo, unako ukuwelda ubuninzi be-polyethylene (LDPE) yentonga ye-welding kwi-polyethylene ephezulu (i-HDPE) kwiphepha kodwa kungenjalo. Isizathu sokuba silula. Ukuphakama koxinano kunokuba nzima ngakumbi ukwahlulahlulahlula izinto ezenziwa nge-weld. Ukuba izinto azinakwaphulwa ngeqondo elifanayo emva koko azinakho ukudibana ngokufanelekileyo. Ngaphandle kokuqinisekisa ukuba uxinano lwakho luyahambelana, i-polyethylene yiplastikhi elula ekulula ukuyidibanisa. Ukufakela i-LDPE kufuneka ubeneqondo lobushushu malunga ne-518 ° F / 270 ° C, umlawuli osetiweyo malunga ne-5-1 / 4 ukuya kwi-5-1 / 2 kunye ne-rheostat kwi-5. Njenge-PP, i-HDPE iyakwazi ukurhangqwa ngo-572 ° F / 300 ° C.
Iingcebiso ngeeWelds ezifanelekileyo
Phambi kwe-thermoplastics ye-welding, kukho amanyathelo ambalwa alula ekufuneka ethathiwe ukuqinisekisa nge-weld efanelekileyo. Coca yonke indawo, kubandakanya intonga ye-welding, kunye ne-MEK okanye isinyibilikisi esifanayo. Groove i-substrate enkulu ngokwaneleyo ukuba yamkele intonga ye-welding kwaye emva koko usike isiphelo sentonga ye-welding kwi-angle ye-45 °. Nje ukuba i-welder ihlengahlengise kubushushu obufanelekileyo, kuya kufuneka ulungiselele i-substrate kunye nentonga ye-welding. Ngokusebenzisa incam yesantya esizenzekelayo umsebenzi omninzi wokulungiselela wenzelwe wena.
Ukubamba i-welder malunga ne-intshi ngaphezulu kwe-substrate, faka intonga ye-welding kwincam kwaye uyihambise phezulu nasezantsi isindululo kathathu ukuya kwesine. Ukwenza oku kuyakufudumeza intonga ye-welding ngelixa ushushubeza i-substrate. Isibonakaliso se-substrate sikulungele ukudityaniswa kuxa uqala ukufumana isiphumo sokungqubana-ngokufana nokuvuthuza kwisiqwenga seglasi.
Sebenzisa uxinzelelo oluqinileyo nolungaguquguqukiyo, tyhala ezantsi ebhuthini yesiphelo. Izihlangu ziya kutyhala intonga ye-welding kwi-substrate. Ukuba ukhetha njalo, yakuba intonga ye-welding ibambelela kwi-substrate, ungayeka intonga kwaye iya kuzitsala ngokuzenzekelayo.
Uninzi lwe-thermoplastics lunesanti kwaye amandla e-weld awazukuchaphazeleka xa esandeni. Usebenzisa i-60-grit sandpaper, isanti kwindawo ephezulu yentsimbi ye-welding, emva koko usebenze indlela yakho ukuya kwi-360-grit sandpaper emanzi ukuze ugqibe ukucoceka. Xa usebenza ne-polypropylene okanye i-polyethylene, kunokwenzeka ukuba uphinde ubuyisele umphezulu wawo ocwebezelayo ngokufudumeza kancinci umhlaba ngetotshi evulekileyo etyheli evuthayo. (Gcina ukhumbula ukuba iinkqubo ezikhuselekileyo zokukhusela umlilo kufuneka zilandelwe.) Nje ukuba la manyathelo agqitywe kufuneka ube ne-weld ebonakala ifana nefoto esezantsi ngasekhohlo.
Ukugcina ezi ngcebiso zingasentla engqondweni, i-welding thermoplastics inokuba yinkqubo elula ukuba uyifunde. Iiyure ezimbalwa zokuziqhelanisa nokudibanisa iintsimbi ziya kunika "ukuziva" ukugcina ilungelo nkqu noxinzelelo kwintonga ngqo ezantsi kwindawo ye-weld. Ukuzama ngeendlela ezahlukeneyo zeeplastiki kuya kunceda inkqubo eyiyo. Ngezinye iinkqubo kunye nemigangatho, nxibelelana nomhambisi wakho weplastiki.
Lwedilesi: No.228 Huisheng Road, Fenghua, Ningbo
I-Welding yinkqubo yokudibanisa i-surfac ...
Ngaba umbhobho we-PE ulungele usetyenziso lwamanzi okusela ...
Iinkqubo imibhobho Polyethylene ziye u ...